Uyifaka njani i-Doc's Master ICS V12 rom ye-Samsung Galaxy S | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-rom endiyibonisa apha ngezantsi yenye yeyona misebenzi mihle kwihlabathi Iirom ziphekwe ngesiseko se-ICS eyethu Samsung Galaxy SNgaphandle kokubandakanya Iiapps zeSamsungAngaba njani umphathi womsebenzi okanye ivenkile yakho yosetyenziso, Iiapps zikaSamsung, Inokusebenza kwebhetri kunye nokucaca kwenkqubo okusishiya sichukumisekile, sinika esi sigxina sikhulu, ubomi obutsha kunye nobomi obude.
I-rom eyenziwe nguVibranturk, Inomsebenzi obalaseleyo nocacisiweyo womfanekiso, ukongeza kwisindululi se-ICS uqobo, i-Apex Launcher, ibandakanya isiqalisi esitsha kwisitayile esinyulu se-MIUI roms, kunye nomdlali wayo womculo okanye umhloli wefayile wolu hlobo lwee-roms.
Inyani yile Nam ndiyifakile kwisiphelo sam, kwaye yonke imihla i fluidity kunye nokusebenza sithandwa sam Samsung Galaxy S, kusafuneka inike iimfazwe ezininzi, konke enkosi kubaphuhlisi abanjengabo Vibranturk.
I-Master's ICS V12, Ngumsebenzi ongathandabuzekiyo, ukuba uyifakile kwisiphelo sakho, iya kuhlala nawe ixesha elide, ukusukela ngokusebenza nokusebenza kwayo, njengoko iintsuku zihamba kwaye njengoko umsebenzi uhlala kwisixhobo sethu, lisebenza lonke ixesha ngokugqibeleleyo
Ukuze le rom isebenze ngokuchanekileyo kwi Samsung Galaxy S, ibalulekile, faka ukucoceka ngokupheleleyo, ukufomatha yonke into ngokufumana kwakhona, ke ngoku ukufaka i-firmware yeJVU kunye neCFRoot yayo nge-odin.
Kuya kufuneka sisebenzise i ukususa iibhagi kwi-USB Kunye nokuba Ibhetri sethu kwisixhobo kuhlawuliswe ngokupheleleyo, kuba ukuba akunjalo, ibhetri ayizukusinika intsebenzo njengoko ilungileyo inika ngale rom ifakiwe.
Sikhuphele i-rom ye-Doc's Master ICS V12, kwaye siyikopa ngaphandle kokucinezela kwi Ingcambu yememori yangaphakathi ye-Galaxy S
Sicima i-terminal kwaye siyivule kwakhona kwimowudi yokubuyisela.
Buyela umva ukubuyela kwimenyu ephambili yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ukunyuka kunye nokugcinwa kunye nefomathi yenkqubo, i-cache, idatha kunye nedatha.
Buyela umva ukubuyela kwiscreen sokufumana kwakhona.
Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi, sijonga i-zip ye-rom kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo.
Ngale nto uya kuba nayo Uxwebhu lwe-Master V12 rom ifakwe ngokufanelekileyo kwifayile yakho ye- Samsung Galaxy S, ukuba ngexesha lokuqalisa kwakhona okokuqala ngqa, izakuhlala ilophu kwisikrini sokuqala, ungothuki, kuba kuyinto eqhelekileyo, oku kuya kuthetha ukuba kufakelo lokuqala, ufake kuphela i-kernel ye-romUkuyisombulula kuya kufuneka ufake kwakhona ukubuyisela kwakhona usebenzisa i-combo yamaqhosha amathathu kwaye uphinde ukhanyise i-rom ukusuka kwinqanaba le-9, ngaphandle kokufuna sula nantoni na.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, iRom Dark Knight 5.5, I-Samsung Galaxy S, uyifaka njani i-Rom ngendlela ecocekileyo, I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo
Imvelaphi xdadevelopers, Vibranturk
Khuphela - I-Doc's Master ICS V12 Samsung Galaxy S
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Khuphela i-rom Samsung Galaxy S Doc's Master ICS V12
Ngaba unokwenza uthelekiso neNight Knight esanda kunconywa? Ndiyifakile kwaye ihamba kakuhle kodwa njengoko bepeyinta iyafana ndibiza ibhetri ngolunye udanyazayo: p
Ndiyincoma ngokwam, iRom iphumelele kakhulu,
kwaye ukuba ulandela imiyalelo ebengezelayo kwileta uyakubona endikuxelela kona.
Andikwazi nge-broadband ...
Ndizamile ukutshintsha imodem, ndakhangela i-APN izihlandlo eziliwaka kodwa akukho tyala ... into evelayo? Ngaba ikhona indlela yokubona ukuba yeyiphi i-tel esebenza kuyo?
Zeziphi iimodem ozizamile?
ngoku ukuba ... i-ICS yam igqibelele ... emva kokuhamba-hamba kakhulu ndafumanisa ukuba kwi-APN enye kukho iindlela ezimbini, bendihlala ndisebenzisa indawo esemthethweni yomboneleli wam wenethiwekhi, kodwa apho ndifumene enye enolunye uhlengahlengiso oluncinci .. .. ENKOSI!!!
Ixesha likaSawule sitsho
Molo, ndiyifakile kwaye yonke into igqibelele (kulungile, ukuphazamiseka okumbalwa kuqala kodwa xa ndiqala ndicinga ukuba kuyinto eqhelekileyo). Umcimbi uyeza xa undixelela loo nto, kwaye ndicaphula ngokoqobo, "Inkqubo ye-android.process.media ime."
Yiyo leyo, naluphi na uncedo? Imibuliso kunye nemibulelo!
Phendula ixesha likaSawule
Ngaba uyenzile ukucoceka okucocekileyo?
Sele isonjululwe. Icebo yayikukuba xa ufaka, linda imizuzu eli-10 ukuba kukho imfuneko, ungaqali emva kwemizuzu emi-3 ukuba ubona ukuba ijika kakhulu.
Hi ndlela leyi, kwafika ulonwabo rom, huh? gratz kunye ty kwiphepha! : _)
Yonke eyona nkcazo ilungileyo yokulayisha iROM esele ndiyibonile, enkosi kakhulu ngawo wonke umsebenzi, umbuzo nje omnye, indicela ukuba ndihlaziye i-Apex Launcher nje ukuba ukufakela kugqityiwe, ndiyabuza kufanelekile ukwenza oku okanye ndiyishiya ngokungagqibekanga enye iza?
Omnye umbuzo, kuseto / Malunga nefowuni / inombolo yemodeli ndifumana i-SGH-T959
ayifanelanga ukuba yi-gt-i9000?
Into efanayo yenzekile komnye umntu?
Akukho nto yenzekayo, enkosi kwezo nkcukacha zokusebenza ezinjengeViber zisebenza ngokugqibeleleyo
Ewe, ndinamathandabuzo malunga nokuba ndiyibeka le ROM okanye i-Dark Knight. Ngowuphi ocinga ukuba ungcono uFrancisco? Okanye enye i-ICS. Izinto ezincinci ezisebenze kwi-Gingerbread zingcono kwaye nangaphezulu kwabo bonke ubomi bebhetri.
Le rom yeyona nto ingcono onokuyifumana, kuya kufuneka ulandele inkqubo yokufaka ileta.
Enkosi ngengcaciso, kodwa umntu uyazi ukuba ndingazifaka njani ezinye imixholo.
Molo, ndinjani? Ndingumqali kwaye ndinamathandabuzo.Ndibonile uninzi lwezifundo kwaye akukho nanye ekhangeleka ngolu hlobo… njengale… kukho isifundo sevidiyo ukubona umboniso wofakelo lwalo msebenzi Inkqubo. hehehehehe
Ndifumana lonke ixesha i-android.process.media kwaye ivala yonke into, kwaye ndizama ukufaka ezinye iirom kwaye akukho nto, ukuba umntu unokundinceda nceda? Enkosi
Landela le khokelo kwaye uza kuyilungisa. Lungisa ukuvalwa kwamandla amaninzi
Molo, kancinci kancinci ndiye ndayiqonda yonke le mhlobo wam, kodwa ndingayifumana phi ipda, umnxeba, i-csc ??? Ndifuna ukufaka i-rom doc's master v12 kwaye andifuni ukwenza impazamo, nceda uncede… Enkosi
Ungakhathazeki malunga nokufaneleka kwam ndenze yonke into enkosi kakhulu
Umsebenzi olungileyo ewe mhlekazi! Ndenza okuhle kwaye bendiyithanda kakhulu, kodwa inengxaki encinci enkulu andinakho ukudibanisa ne-pc. Ngaba kuye kwenzeka komnye umntu? Ungandixelela ukuba yeyiphi i-rom onokuyidibanisa? Ndiyabulela kakhulu, ndingumfana omtsha kwaye andazi ukuba ndingenza ntoni. Enkosi ngayo yonke into
Kuyamangalisa ukuba unxibelelwano nePC lufezekile, nkqu ne-sd yangaphandle kwezinye iirom ihlala inika iingxaki.
Mhlawumbi ibiyingxaki edanyazayo kwaye inokusonjululwa ngokudanyaza kwakhona.
Ngaba unayo i-galaxy s kwi-pc yakho?… Zinokukhutshelwa naphi na, zama ukubona.
Izolo ndigqibe kwelokuba ndibeke kwi-SGS yam amaxwebhu owabhengeza apha, ngokubonakalayo okuhle ngokubhekisele kubuchule nangona, i-3 yokuqalisa kwakhona kwesiphelo (1 xa ucofa Isikhangeli kunye no-2 xa uvula i-Wireless), ndiyicimile ifowuni Ukutshaja oku ngomso malunga ne-07.00 kwaye ngoku (14.34) ikwi-21% isebenzisa usetyenziso olufanayo nolwe-Gingerbread 2.3.6 kwaye, yintoni endicaphukisileyo, i-SD.
Ekugcinweni ndibona i-SD yangaphakathi enezicelo, idatha njl.njl, kodwa i-8 Gb SD yangaphandle iyibonisa ngwevu ngokungathi ayiyamkeli, nangona, ukuba iyayamkela kwaye indibonise inxenye yomxholo (ayisiyiyo yonke) , Hayi ndiyazi ukuba xa uyinyusa intaka encinci okanye i-bug ihlala, ndicinga ukuba ndiza kukhuphela i-Gingerbread kwakhona, kuba i-RemICS andifumani ndlela yokukhuphela.
Enkosi ngomsebenzi wakho, ndingathanda ukuba ne-ICS kodwa emva kokuyifaka okwesibini, kwaye okwesibini, ndikhuphela iGinger, ndicinga ukuba i-SGS izalelwe iFroyo / Ijinja kwaye kulapho kufanele ukuba ibekhona, Yonke into inexesha layo nendawo yayo, kwaye indawo ye-SGS ikunye noGinger kakhulu 🙁
Kuya kufuneka ugcine i-SGS III: -DDD
Le rom isele iphelelwe lixesha, jonga ibhlog yezona zingcono njengeJelly Bean yamvanje okanye i-RemICS-UX
Molo bendifuna ukwazi ukuba ngaba kunyanzelekile na ukuba ndenze i-odin kunye ne-CF Root amanyathelo okufaka ii-master docs, ukuba kunyanzelekile ke kufuneka ndifake ingxelo engu-2.3.6 kwakhona nge-odin emva koko ndiye kwi-sd khadi inkosi amaxwebhu?
UCésar Irnán Sillero sitsho
Molo, ndinguCésar (andazi ukuba kutheni igama lam lingaveli kwiposti) ndinengxaki, ndifake i-rom kumthala wam weveki edlulileyo, kwaye ndacima kanye xa ndicima ukuyivula kungena kwiscreen esingenasiphelo sokuqalisa kwesikrini se-Samsung emva kwe-kernel enomkhenkce kwaye ndibuyela kwi-Samsung njalo njalo, ndiya kungena kwimowudi yokubuyisela kwakhona kwaye ngaphezulu koko ndiye ndafomatha ikhompyuter kutshanje, ndiyekile i-w8 kwaye ii-kies azisebenzi nokuba ... ke andinabo abaqhubi kwaye i-odin ayiqapheli i-mvl (yokukhuphela imowudi ukuba iyangena)
Phendula César Irnán Sillero